Tsy tokony ho sakana amin`ny fampandrosoana kosa amin`ny alalan`ny fitantanana raharaham-panjakana sy rafitra ara-toekarena maro samihafa. Ekena fa tsy tonga dia nanaraka ny hafainganam-pandehan`ny fitondrana ny rehetra satria niaina tao anaty gaboraraka tanaty fotoana maro. Mila ezaka ny mitarika ny fanovana toe-tsaina sy fampandrosoana ary ny olom-pirenena tsirairay ihany koa dia mila miaraka misalahy. Tsy maintsy miara-mirona satria tombontsoa iombonana no jerena. Efa ho avy ny fifidianana ben`ny tanàna ary any amin`ny fifidianana ny fifandrombahana fahefana na dia amin`ny lafiny politika aza. Mila sarihana ny adihevitra ankehitriny dia ny amin`ireo fepetra entin`ny fitondram-panjakana amin`ny fampandrosoana sy fitantanana raharaham-panjakana. Samy mitondra ny tsikera sy ny fanatsarana ary rehefa tonga ny fifidianana dia any no mifaninana.